Sir La Helay: Man United oo dhameystirtay heshiis ciyaaryahan ka ciyaara daafaca dhexe oo ay baadi goob ugu jirtay. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Sir La Helay: Man United oo dhameystirtay heshiis ciyaaryahan ka ciyaara daafaca dhexe oo ay baadi goob ugu jirtay.
Sir La Helay: Man United oo dhameystirtay heshiis ciyaaryahan ka ciyaara daafaca dhexe oo ay baadi goob ugu jirtay.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 5-06-16 12:30 PM Manchester United ayaa lasoo tabinayaa iney heshiis la gaartay daafaca kooxda Villarreal Eric Bailly iyada oo ay shayadiinta cas cas bixin doonta 31 Milyan oo ginni.
Kooxaha Manchester iyo Villarreal ayaa yeeshay wada hadal guul kusoo idlaaday iyaga oo ku heshiiyey 22 jirka in xilli ciyaareedka soo aadan uu kasoo muuqdo horyaalka Ingiriiska gaar ahaan gegida Old Trafford.
Sida lagu daabacay wargeyska ugu carabka dheer dalka Spain ee AS Man United ayaa la kulantay wakiilka xidigan iyada oo ka dhaadhicisay sidii uu ugu soo muuqan lahaa da’yarkan kooxda Man United.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in xidigan u dhashay dalka Ivory Coast inuu u buuxiyey kooxda ku ciyaarta funaanada Jaalaha ah booska uu soo baneeyey xidigii xagaagii hore kusoo biiray kooxda Arsenal Gabriel Paulista, waxa uuna xulka dalkiisa kasoo muuqday kaliya 15 jeer.